Ndị na-emepụta AP na ndị na-arụ ọrụ AP - nke China na-agbanye AP Factory
WL8200-WH2 802.11ac Wave 2 Na-mgbidi Dual Band Enterprise AP
WL8200-WH2 bụ 802.11ac wave 2 based dual band high-arụmọrụ wireless access point (AP) nke na-akwado akara ngosi 86 dị elu maka nrụnye dị mfe; ọ kwesịrị ekwesị maka ụlọ nkwari akụ, agụmakwụkwọ, gọọmentị, na netwọkụ azụmahịa. Key Key na Highlights Wired na wireless gigabit nweta WL8200-WH2 jikọrọ abụọ gigabit wired uplink ọdụ ụgbọ mmiri, nwere ike n'ezie izute bandwidth chọrọ nke wireless ahịa na anọ-gigabit downlink Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri nke na-akwado mgbanwe VLAN nhazi, the ...
WL8200-WL2 802.11ac Na-mgbidi Dual Band Enterprise AP
WL8200-WL2 bụ 802.11ac dabere na ọnụ ahịa ikuku na-enweghị ego (AP) nke DCN wepụtara maka ile ọbịa na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ. WL8200-WL2 na-akwado ọkọlọtọ 802.11AC, ọnụọgụ ikuku ikuku zuru ezu nke 733Mbps. (Oghere 2.4G nwere ike inye bandwidth 300Mbps na 5G band nwere ike inye bandwidth 433Mbps). Key Key na Highlights Mfe idokwa WL8200-WL2 nwere ike arụnyere na ọkọlọtọ 86 panel, enwere ike itinye ya ngwa ngwa site na ịdozi kposara abụọ, yabụ ịwụnye otu AP naanị ...
DCWL-2000WAP (R2) 802.11n Single-gbalaga mgbidi-n'ịnyịnya AP
DCWL-2000WAP (R2) bu ohuru ohuru 802.11n gbadoro onu ahia ikuku (AP) nke bara uru maka ulo oru na ulo akwukwo. DCWL-2000WAP (R2) na-akwado ọkọlọtọ 802.11n, otu otu 2.4G nke nwere ike inye bandwidth 300M. Ọ ga-arụnyere na a ọkọlọtọ 86 panel enweghị mgbidi nwughari na ya ọkpụrụkpụ bụ naanị 22mme. Key Key na Highlights Mfe idokwa - Ndenye echichi DCWL-2000WAP (R2) nwere ike arụnyere na ọkọlọtọ 86 panel, ọzọ ...